Uyabakhathalela umkhiqizo noma iyiphi impahla, kungakhathaliseki ukuthi usilika, lesikhumba noma yelineni, usikisela akazihloniphi izinto, kanye ukusabela ngokushesha yezinguquko owaqalwa izingubo zakho ozithandayo noma isesekeli. Namuhla sifunda indlela efanele banakekele ikhabethe izinto, izesekeli (izikhwama, amabhande), imihlobiso yegolide.
Imigomo sengqondo niqaphele ukuba lesikhumba izinto
Kunezindlela eziningana kucutshungulwa isilwane izikhumba. Ngakho, inani elikhulu izinhlobo isikhumba. Ngokwesibonelo, nubuck, Sweden, Sweden, isikhumba patent noma izikhwama, amagilavu, amabhande, noboya amajazi - zonke izimpahla lesikhumba. Ukunakekela lesikhumba izimpahla kudingeka ngempela. Kukhona imithetho jikelele okufanele zilandelwe uma ufuna ethengwayo wakhonza ngaphezu konyaka owodwa:
Utho uthola uthuli, ngakho-ke kubalulekile nihlanze umkhiqizo walo. Isikhumba izesekeli ezifana amabhande, izikhwama kungenziwa wesula ngendwangu emanzi. izingubo zangaphandle eyenziwe lesikhumba kungenziwa embossed noma cleaner.
Gcina lezi zinto izikhwama zepulasitiki bengayi, ngoba kamuva jacket noma ijazi ngeke ngiwahogele unpleasantly. Ungakwazi ukumboza izimpahla lesikhumba nge indwangu yelineni noma esikhwameni.
ukuxubha abashisekayo Ikakhulukazi imikhiqizo enjalo futhi akudingekile. Phela izinto lesikhumba abe ungqimba elincanyana zokuzivikela, okuyinto, lapho ingxenye ukucutshungulwa kungenziwa sisuswe. Uma uphume okokuqala into entsha emgwaqeni, kuyatuseka ukuba aphathe jacket, elingenamikhono, izicathulo noma ezinye lesikhumba into impregnation ekhethekile. Lokhu kuzokwenza ukuvikela umkhiqizo kusuka ukungcola kanye umswakama.
Ungayisebenzisi ukuze bahlanze isikhumba izinto acetone, benzene noma ezinye yokususa ingcekeza elenkani.
Kungcono ukuba bangagqoki yemikhiqizo yesikhumba ngesikhathi isiphepho esinemvula. Kodwa uma imvula isiqalile ukuna ngokuzumayo, ufika ekhaya, udinga ukusula ucezu ezomile futhi ethambile sendwangu izingubo ezimanzi. Dry lesikhumba izimpahla ku ibhethri akukwazi.
ewusizo kakhulu ngezikhathi ezithile esesula mikhiqizo glycerol. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene ezinjengenyanga futhi cuffs ku jackets, amajazi. Lokhu kuyokunika phezulu izingubo bukhanye.
Indlela ukuqeda amabala?
ukunakekelwa Isikhumba kuhilela isimo sengqondo ngokucophelela izinto, isitoreji efanele futhi yokuhlanza. Uma izingubo noma izesekeli kwale nto zemvelo ziye zavela iminonjana amamaki, kungenzeka ukuqeda kubo ngezindlela ezilandelayo:
Amabala fat, uwoyela nokunye. N. Can zisuswe kusetshenziswa powder wokulinganisa. Udinga ukugcwalisa kubo endaweni engcolile, shiya umkhiqizo ngosuku. Khona-ke nivuthulule wokulinganisa, kanye ibhulashi into khuhla.
Iminonjana obungangenhloko kakhanjana izibaya angasuswa nge ngethephu enamathelayo. Vele kudingeka unamathisele ku ibala, ngokucophelela ucindezele phansi bese udonsa kakhulu. Izinsalela irabha ahlanzekile.
Amaconsi imvula izinto lesikhumba bahlanza nje, ayesebenza ne ibhulashi bacondze etindzaweni letehlukene.
Uma umkhiqizo is ongcolile, kungcono balidlulisele kuya ilondolo.
Uyabakhathalela imikhiqizo ayenziwa ngesikhumba esishukiwe yokufakelwa: imithetho
Nakekela izinto kusukela isikhumba ezingezona ezemvelo kulula kakhulu kunalokhu. Eqinisweni, bonke okudingeka ukwenze njalo - ke nje ukusula ebusweni nge elithambile Foam isipanji ofakwe amanzi afudumele soapy. Khona-ke Sula ngendwangu eyomile soft bese uvumele ukuze ome endaweni limbo at evamile ekamelweni lokushisa. Underside lendwangu kwesikhumba yokufakelwa akukwazi ezimanzi, njengoba lokho kuyoholela ukusonteka. Wena ubuye abakwazi ukubeka izinto ngaphansi ibhethri. Dabula noma bhala umkhiqizo kusuka mbumbulu lesikhumba nakho akuvunyelwe.
Cream nezinto ezenziwe kulokhu kwaziswa akudingeki - they fanele umphumela. Ukuze udlulisele imikhiqizo eyanele ukukhanya wazesula neziponji. Ukunakekela umkhiqizo kusuka mbumbulu lesikhumba akasebenzisi amakhemikhali.
Izinto ezivela impahla imvelo
Sweatshirts, izikibha, ibhulukwe, abenziwe nelineni zemvelo eziningi abalandeli. Lokhu akusona isimanga, ngemva konke lokhu imikhiqizo impahla kunezimo eziningi. Ziyakwazi:
Ukwenza Izinto Zibe Lula abebeziphilisa ngako.
Embethe ilineni, umuntu ezizwa, isikhumba sakhe "ukuphefumula." Izinto kwale nto awathandi out, hhayi fade elangeni, musa fade, hhayi sikhubazekile, kusulwe ngokuphelele, ngaphansi angcolile. Basuke ukuncela kahle umswakama, kahle esiwuhogelayo, awunamatheli emzimbeni.
Indlela geza izinto insimbi evela impahla imvelo?
Ukunakekela imikhiqizo nelineni kudinga okungenani, ngokungafani kuya izinto lesikhumba. Into esemqoka - ukwazi ukuthi ukuwasha noku-ayina izinto.
imikhiqizo Geza nelineni kudingeka ngesandla noma emshinini wokuwasha emjikelezweni olubucayi. Ukuhlanza izinto udinga ukusebenzisa insipho noma yokuwasha, ezazihlanganisa kungekho ejenti amakhorali. Uma uwayehlalise kususa ngesandla, bese impela izikhathi ezimbalwa ukumpintsha out ibhantshi noma ibhulukwe kuya ingilazi yamanzi.
izinto nelineni ironed kuyadingeka kuphela ohlangothini reverse. Futhi lokhu kufanele kwenziwe ngokushesha emva ukuwasha. Uma uvumela izinto ukuze ome, bese ungatholi kubo ironed kahle. Phela, izinga lokushisa yensimbi kumele singeqi degrees 200.
I ntambo ikhiqizwa bolls ukotini
Sikhuluma ukotini - izinto Lokudabuka zemifino. Ukuqhathanisa imikhiqizo yalesi Indwangu izinto nelineni kungase kuqashelwe ukuthi ukufudumala Ukotini umphumela itsatfwa ephakeme. Libuye namandla kunomFilisti uvolo, kodwa kancane, eliqinile kuka kasilika. Izinzuzo Umphumela imikhiqizo ukotini yilezi:
Ijubane umswakama ukumuncwa.
Futhi izinto ezinjalo elula futhi kumnandi ukugqoka, athambe futhi amelana edwengula. Ukwelashwa kwemikhiqizo kusuka ukotini akudingi mzamo okuningi. Nokho, kukhona le nto nemibi yayo. Ngokwesibonelo, ngaphansi elangeni ukotini lingaphansi eqinile. Futhi kusukela kule izinto ezibonakalayo kakhulu, "ahlale phansi" isikhathi eside ukuze ome.
Indlela anakekele imikhiqizo eyenziwe kusukela ukotini?
Geza izinto kulokhu kwaziswa kungenzeka ngesandla emanzini afudumele ezingeni lokushisa 30-40 degrees. Futhi umshini washable akuvumelekile umjikelezo olubucayi.
Ukunakekela umkhiqizo ukotini aluhileli ukusetshenziswa amakhorali amanxusa. Ngokwesibonelo, chlorine is contraindicated ukwaziswa okunjalo.
Uma umkhiqizo ukotini asivumelani ngokuqinile buphela, kufanele wageza ngamanzi abandayo, yomiswa ifomu waqonda ngokushesha ngemva uhlambulule. Ukuze amanzi okugeza kuwo kumele ukungezwa usawoti (1 isipuni ngalinye 10 amalitha amanzi).
Uma into umbala ukotini, bese ubuyela kuwo umbala odlule kuzosiza amanzi ashisayo (degrees 70) soda (1 isipuni ngamunye 5 amalitha amanzi). Shiya ngobusuku obubodwa bese ugeza ngesandla futhi hashaza.
Kuyinto engathandeki ukuze ome izinto aphume ukotini elangeni - bangathumela ushise.
imikhiqizo Iron kulokhu kwaziswa udinga kusukela ngaphambili, ne T-shirt, isiketi noma ibhulukwe kumele kube emanzi. Uma ku indwangu has efekethisiwe noma yimuphi omunye ikhava, khona-ke kumelwe abe bamba ithambo ohlangothini reverse. Phela, izinga lokushisa yensimbi kungenzeka ngezinga eliphakeme kakhulu.
Izincomo for abantu abasebenza ukugqoka imikhiqizo Suede
Amafutha amabala, setha ezintweni le nto, kubalulekile ukuthola indwangu emanzi, futhi ukukwenza ngokushesha. Igezwa amabala ezinjalo ngeke zikwazi.
Isehlukaniso kusuka ice cream, amaqanda, igazi ngezinto ezinjalo kufanele wageza ngokushesha ngamanzi. Kulokhu, akukho amakhemikhali ekusebenziseni akudingekile.
Akuvunyelwe ukusebenzisa usawoti ukuvuseleleka Suede umkhiqizo. Yena kuphela discolor zezinto ezibonakalayo nezingokomoya zichithe ngokuphelele esikhwameni ozithandayo, izingubo ngaphandle noma enye into.
Umkhiqizo Ukunakekela Suede eqala impendulo womuntu tekusebenta kunoma indawo esele ku-material. Uma umuntu engazinaki mthetho futhi akazami ukuba ngokushesha abalethanga behlukana, khona-ke kuyoba nzima kakhulu ukubuyela eyintandokazi isikhwama Suede (noma ezinye izinto) ukubukeka yokuqala.
okunakekela ukwaziswa okunjalo kudinga ukuhambisana nemithetho elandelayo:
Susa zithutha futhi kokuqina kungaba umshini ekhethekile noma insingo njalo. Ukuxubha noma ngokucindezela izinto Centrifuge akuvunyelwe.
Iron imikhiqizo noboya kudingeka kuthabathela ecaleni embi ngokusebenzisa cheesecloth.
Geza izinto ukwaziswa okunjalo kufanele kube ehlukile kwezinye izicubu.
Musa uyasikrufulula woollens njengoba ngokushesha ukulahlekelwa isimo sabo futhi donsa in.
Iphele uvolo Ezinkantolo, jackets kudingeka phezu ovundlile ku terry ngethawula. Akuvunyelwe hang izinto ezifana clothespins, ngoba yokwelula noma avele izimpawu ebukekayo, okuyizinto ke kunzima ukususa.
Azonakekela igolide, namacici, imihlobiso elengayo
Wonke umuntu wesifazane othanda ukugqoka ubucwebe. Iningi fair ubulili okuthandayo igolide. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi uchungechunge ozithandayo noma indandatho mnyama luphola. Ukuze imikhiqizo igolide bekulokhu nice and elikhanyayo ngabo badinge ukunakekelwa okukhethekile. Futhi kubalulekile ukuba ukugcina imithetho wokusebenza nemihlobiso futhi uwugcine.
Ukunakekela imikhiqizo igolide kuchazwa izenzakalo. Lezi zihlanganisa:
Ukuhlanza. Ngo ingilazi yamanzi afudumele engeza 10 amathonsi ammonia kanye amaconsi ambalwa imoto (ikhona). Isixazululo ukulungele ukubeka ubucwebe igolide amahora angu-3. Ngemva kwalokho, kancane bakuthinte nge isixubho esithambile ukususa ukungcola. Bese hashaza ngaphansi kwamanzi yomiswa.
imikhiqizo amnyama igolide kungenziwa ngiqabuleke ngosizo onion juice. Udinga bazigcobe ubucwebe futhi ushiye amahora ama-2. Khona-ke nje ukususa ngaphansi Emanti futhi yomile.
Amabala on the imihlobiso yegolide (isib iodine) angasuswa, ukwehlisa indandatho, chain noma namacici imizuzu engu-20 in isixazululo hyposulfite.
Fibre etholwe ngenxa amacimbi kasilika amacimbi
Libhekisela esizidingayo, ezifana usilika. Izinzuzo Product le nto zemvelo:
breathability Excellent. Imikhiqizo usilika abantu ngeke bakhululeke, sengathi ngaphandle izingubo.
Gqoka ukumelana - uma kwenziwa imikhiqizo ukunakekelwa kwesokudla wenza kasilika ke into akuyona ukulahlekelwa isikhalazo eminyakeni.
ukumuncwa Rapid izithukuthuku.
Instant umswakama ukuhwamuka.
Yokuhlanzeka - imikhiqizo kasilika ukuvikela ukuhlaselwa izintwala, amakhizane nezinye izinambuzane.
thermoregulation Excellent. Izinto ngokushesha ukuthola izinga lokushisa komzimba nokugeleza musa ibakhathaze.
ukunakekelwa kahle imikhiqizo usilika
Geza e umshini kuphela imodi ye isinyathelo ngokucophelela.
Shoe Ivunyelwe ngesandla, ngaleyo ndlela ukukuthinta kakhulu kungavunyelwe wakhe.
Amazinga elikhulu okugeza - degrees 30, kugeze - degrees 25.
Shutheka imikhiqizo usilika kudingeka ngokucophelela nangokuqondile.
Hang izingubo omiswe akufanele elangeni ngqo, qiniseka umthunzi. Ngafaka ibhethri ezimanzi kasilika izinto akukwazi. Uma ome nabo efulethini, singasijabulela ukubola izingubo dryer in limbo.
Sidinga insimbi yensimbi kancane eshubile.
Uyabakhathalela izihloko ithungwe kasilika kwakudingeka ngempela, ngoba uma aphathe izinto lezi zincwadi zokuphola ke uyobheka ezishibhile, zingcolile futhi kabi.
Ukuze wenze kube lula ngabantu ukuba baqonde indlela ukugcina kahle ithrekhi izinto kusukela ezihlukahlukene izinto, abakhiqizi bayatfutfuka ithiphu ekhethekile. Imithetho eyisisekelo ngokunakekela imikhiqizo evezwe kuhle kwilebula, ilebula isiphi isesekeli izingubo. Ukuze ubone ngokushesha okunjalo futhi wonke umuntu can, ubuka bephambene sweaters intandokazi yakho, jeans, izikhwama. Abakhiqizi bathi imithetho lwezinhlamvu ezikhethekile ozifunayo - wokugubha. Njengamanje, lezi izimpawu ziya esabekwa international ISO ejwayelekile. Lezi zinhlamvu amelwe eyizithombe futhi kungasho okulandelayo:
ukwenqatshelwa kokusetshenziswa kwabantwana eyohlinzwa;
Buka okulotshiweyo zalezi zimpawu zingaba ku kulo mdwebo ongezansi.
Lesi sihloko kuyoba usizo kubantu abaningi, njengoba yazi nabo imithetho eyisisekelo ukunakekelwa izinto. Into esemqoka - ukuze anakekele iyiphi ingubo yokugqoka, futhi ufunde ngokucophelela Ukwaziswa okunikezwe ephepheni ilebula. umkhiqizo Ukunakekelwa ngendlela efanele uzobe bahlangana kuphela uma umuntu ngeke uzibe ilebula, okuyinto baye ohlangothini olungelona sayo yonke into, kungakhathaliseki ukuthi kungcono ingubo, ijezi, isikhwama, noma ithawula.